Madheshvani : The voice of Madhesh - नेपालगञ्जलाई नमूना शहर बनाउँछौं : डा. धवलशम्शेर राणा
मेयर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका
० नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र अहिले कस्ता कामहरू भइरहेको छ ?
— यो पहिलो वर्षमा हामी पूर्वाधार विकासमै बितायौं । बाटोघाटो र नालालाई धेरै प्राथमिकता दियौं । जनताको माग पनि त्यही थियो । वार्डहरूमा काम पनि धेरै भएका छन् । विस्तारै हामी अब चौतर्फी विकासतर्फ लम्केका छौं ।
० नेपालगन्ज उपमहानगरका चुनौतीहरू के–के छन् ?
—म मेयर भएको यो दोस्रो पटक हो । द्वन्द्वकालको क्रममा धेरै पूर्वाधारहरू भत्कियो, यी सबैलाई सुधार गर्दै जाँदा एक वर्ष समय लाग्यो । धेरै बाटोघाटो अहिले बन्दैछ । अझ एक वर्षपछि हामी यो नगरलाई सौन्दर्यीकरण गर्छौं ।
० तपाइँ यसअघि पनि नेपालगन्जको मेयर भइसक्नुभएको छ, त्यो बेला र अहिले केकस्ता परिवर्तनहरू भएका छन् ?
— हुन त खासै केही फरक भएको छैन । नगरपालिका त्यही हो, कर्मचारी त्यही हुन् र जनता पनि त्यही हुन् । तर, यसपाली जिम्मेवारी बढी छ । यसपटक अलि भ्याइनभ्याई हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत धेरै कुरा थपिएको छ । यस्ता जिम्मेवारीहरू थप भएपछि हामीलाई भ्याइनभई भएको छ अहिले ।
० अहिले प्राथमिकतामा के–के छन् ?
— खासगरी शिक्षामा क्याम्पसहरू मर्मत गर्नुपर्ने, बाटोघाटो निर्माण, नेपालगन्ज उपमहानगरलाई सौन्दर्यीकरण गर्नुपर्ने, वातावरण स्वच्छ र सफा बनाउनु, वृक्षरोपण गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गर्नुपर्ने, पार्कहरू निर्माण गर्ने लगायत यस्ता धेरै कुराहरू हाम्रो प्राथमिकतामा छन् । हामीले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई एक वर्षभित्र नै सौन्दर्यीकरण गरी नमुना नगरको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।
० ‘सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भन्ने नारा व्यवहारिकतामा लागू भएको छ ?
— स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्देशिकामार्फत् धेरै अधिकारहरू कटौती गर्दै आएको छ । यो नारा अलिकति उपयुक्त भएजस्तो हामीलाई लागेको छैन । तर, विस्तारै संघीयताले जडो गाड्दै गर्ने क्रममा स्थानीय सरकारहरू मजबुत हुँदै आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
० भनेपछि ‘सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा’ नारामै सीमित छ, जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ?
— वास्तवमा भन्ने हो भने नारामै सीमित छन् । जुन किसिमले जनताबीचमा प्रचार भएको थियो त्यस्तो छैन । भन्ने र गर्नेमा फरक छ । संविधानले दिएको अधिकार पनि मन्त्रालयले निर्देशिकाअनुसार कटौती गर्ने क्रम बढ्दैछ । जबसम्म भित्री मनले हामी विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त स्वीकार गर्दैनौं तबसम्म यो राष्ट्रमा सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा जाने जस्ता कुरा नाराकै रूपमा सीमित रहन्छ ।
० ‘सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा’ पु¥याउन तपाइँहरूको प्रयास के छ त ?
— नगरपालिका संघ छ, त्यो संघमार्फत् हामीले पहल गरिरहेका छौं । हामीले अरू के गर्न सक्छौं त ।
० नेपालगन्जलाई लामखुट्टेको शहर भनेर पनि चिनिने गरेको पाइन्छ, लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि के पहल भएको छ ?
— यसपाली कस्तो छ भने पहिलेको कार्यकालमा औषधि छर्कन्थ्यौं । तर अहिले कानून के बनेको छ भने महामारी फैलिन सक्छ भनेर औषधि छर्कन पाइँदैन । यसकारणले लामखुट्टे नियन्त्रणमा हामीलाई अलि अवरोध भइरहेको छ । तर, नेपालगन्जमा त्यत्रो लामखुट्टको प्रकोप छैन ।
० त्यसो भए लामखुट्टे कमी भएको छ ?
— अहिले त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति छैन ।
० विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रगति कस्तो छ ?
— एक वर्षभित्र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्रका सबै बाटो पिच हुँदैछन् । तीव्र गतिले काम अगाडि बढिरहेको छ । हामीले बाटोघाटो निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिएका छौं । पानीको निकासका लागि नालाहरू व्यवस्थित गर्दैछौं, पार्क बनाउने र त्यसलाई आकर्षक बनाउन बत्ती लगाउने कार्यहरू गर्दैछौं । यस्तै, नेपालगन्जलाई सुन्दर र स्वच्छ बनाउन अन्य धेरै योजनाहरू हामीसँग छ ।
० वर्षात्को मौसम सुरू हुने बित्तिकै नेपालगन्ज जलमग्न हुने गरेको छ, पानीको निकासका लागि के हुँदैछ ?
— पानी पर्दाखेरि अलि–अलि सडकमा पानी जम्ने कुरा स्वाभाविकै हो । तर, पानी रोकिएको दुई÷तीन घन्टाभित्र निकासका बाटो हामीले खोलिसकेका छौं । पानी परेपछि डुबान भएर डुंगा नै चलाउनुपर्ने स्थिति छैन ।
० स्थानीय तह प्रदेश सरकारभन्दा बलियो छ भन्ने भनिन्छ, वास्तवमा त्यस्तो छ ?
— प्रदेश सरकार अहिले अलमलमै छ । तर, स्थानीय सरकार त पुरानै सरकार हो । यसको पुरानै संरचना छ । स्थानीय सरकारसँग पहिलादेखि सबै कुराहरू छन् । तर प्रदेश सरकार अहिले नयाँ भएकाले विस्तारै सुध्रिन्छ ।
० प्रदेश सरकारसँग तपाइँहरूको कति सहकार्य भइरहेको छ ?
— अहिले कुनै किसिमको सहकार्य देखिएको छैन । उताबाट पनि सहकार्य हुने स्थिति आएको छैन । तर विस्तारै होला भन्ने हामी आशावादी छौं ।
मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानी